မန္တ‌လေးသား စစ်စစ်တွေတောင်မှ မသိကြတဲ့ တပြဆိုတာ – Alanzayar
မန္တ‌လေးသား စစ်စစ်တွေတောင်မှ မသိကြတဲ့ တပြဆိုတာ
မန္တ‌လေးသား စစ်စစ်တွေတောင်မှ မသိကြတဲ့ တပြဆိုတာ “မန္တလေး တစ်ပြ”
မန္တလေးသူ မန္တလေးသားတွေက မြေပြင်ပေါ်က ခရီးအကွာအဝေးကို ပြောတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်၊ လမ်းညွှန်တဲ့အခါ ဖြစ်ဖြစ် ၁ ပြ၊ ၂ ပြ၊ ၃ ပြ…. စသဖြင့် ပြောတတ်ကြတယ်။ မန္တလေးနဲ့ စိမ်းတဲ့သူတွေက အဲ့ဒီ တစ်ပြနှစ်ပြတွေကို ဘာပြောမှန်း မသိကြဘူး။ တချို့က ကြားဖူးနားဝနဲ့ နားလည်မှုလွဲကြတယ်…
မန္တလေး တစ်ပြဆိုတာ မရေမရာကြီးလိုလိုအတိုင်းအဆမဲ့နေသလိုလို၊ အရမ်းကြီး ဝေးနေ သလိုလို။မသိသေးသူတွေ သိသွားအောင် ကျနော်ဖတ်မှတ်သိရှိခဲ့တာလေးတွေကို ပြန်လည် ဖောက်သည်ချပါမယ်။ “မည်သူမဆို (မှားတာရှိရင် ပြင်ပေးခဲ့ပါ) မန္တလေး ၁ ပြ ဟာ တာ ၅၀ ရှိပါတယ်။ အတိအကျကို တာ ၅၀ ရှိတာပါ။ ရှေးမြန်မာအတိုင်းအတာအရ ‘တာ ၅၀’ ပါ။
၁ တာ မှာ ၇ တောင် ရှိပါတယ်။ မြန်မာအတိုင်းအတာ ၁ တောင်ဟာ အင်္ဂလိပ်အတိုင်းအတာ ၁၉လက်မခန့် နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ (တချို့က ၁၈လက်မလို့ ယူကြတယ်) ဆိုတော့… တာ ၅၀ = အတောင် ၃၅၀ = ၆၆၅၀ လက်မ = ၅၅၄.၁ ပေ ၁ ပြ = ၅၅၄ ပေ ပေါ့ (အနီးစပ်ဆုံး) အဲ့ဒီ တစ်ပြကို တာ ၅၀ က ဘယ်က လာတာလဲ…? မြို့ရိုးကနေ လာတာပါ”မန္တလေးနန်းမြို့ရိုးဟာ လေးထောင့်စပ်စပ်ပုံသဏ္ဍန် ရှိပါတယ်။ မြို့ရိုးကို ပစ္စင် ပြအိုး သူရဲခို သူရဲပြေး ရင်းတား စတာတွေနဲ့ ဖွဲစည်း တည်ဆောက်ထားကြတယ်။
မြို့ရိုးတစ်ဖက်ဟာ ‘တာ၆၀၀’ ရှည်ပါတယ်။ တာ ၅၀ တိုင်းမှာ ပြအိုးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ ပြအိုးနဲ့ တည့်တည့်ကို ဦးတိုက်ပြီး မန္တလေးလမ်းတွေကို ဖောက်ထားတာပါ။ (Google map မှာ ကြည့်ရင် သိပါမယ်) ” ဒါကြောင့်…”တစ်ပြဟာ တစ်လမ်း ပါ”မြို့ရိုးပေါ်က တစ်ပြနဲ့တစ်ပြ အကွာအဝေးဟာ တစ်လမ်းနဲ့တစ်လမ်း အကွာအဝေးပဲပေါ့။
တစ်လမ်းနှစ်လမ်းမပြောဘူး တစ်ပြနှစ်ပြပဲ ပြောတာ မန္တလေးသား။ (အတူတူကိုး)မြို့ရိုးတစ်ဖက်မှာ ၁၂ လမ်း ( ၁၂ပြ) ရှိပါတယ်။
မြို့ရိုးနဲ့ ကျုံးကြားက တာ ၂၀၊ ကျုံးအကျယ်က တာ ၂၀ နဲ့ လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်း ဘာညာသာရကာက ၁၀တာ လောက် ရှိတော့ မြို့ရိုးကနေ နောက်ထပ် တာ၅၀ အကွာမှာ လမ်းတစ်လမ်း ယူထားတယ်။
” အဲ့တာကြောင့်…” ကျုံးတစ်ဖက်စီဟာ ၁၄ လမ်း (၁၄ပြ) ရှိပါတယ်။ မြောက်ဖက်ကျုံးလမ်းဟာ လမ်းနံပတ် ၁၂ပါ တောင်ဖက်ကျုံးဟာ လမ်းနံပတ် ၂၆ ပါ
၁၄ လမ်း ရှိတယ်။ အရှေ့ကျုံးလမ်းဟာ လမ်းနံပတ် ၆၆ ပါ အနောက်ကျုံးလမ်းဟာ လမ်းနံပတ် ၈၀ ပါ ၁၄လမ်း ရှိပါတယ်။ (တချို့ထင်သလို ကျုံးတစ်ဖက်ဟာ ၂ မိုင် မရှိပါ။ ၁မိုင်ခွဲခန့်သာ ရှိပါမယ်။)
မန္တလေးသားတွေက တစ်လမ်း နှစ်လမ်း သုံးလမ်းလို့ မပြောဘဲ တစ်ပြ နှစ်ပြ သုံးပြ စသဖြင့် ပြောကြတယ်”လမ်း နဲ့ ပြ အခေါ် အတူတူပါပဲ။ (မြို့ထဲပိုင်း ပြောတာပါ၊ မြို့သစ်တွေ စက်မှုဇုန်တွေထဲမတော့ လမ်းနံမည်တွေဟာ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေလိုက်တာများ ချီးပုံ ကြက်ယက်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ၊ ပန်းနံမယ်တွေ၊ ရာဇဝင်ထဲက အဘတွေရဲ့ နာမယ်တွေနဲ့ ဘယ်လမ်းဟာ ဘယ်နားရှိမှန်း မန်းလေးသားတွေကို မသိတော့တာ၊ ဇာတ်ပျက်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ခေါ်တာလေ) ချုပ်ပြီးပြောရရင်.မန္တလေး ၁ ပြ ဟာ တချို့လူတွေထင်သလို မရေမရာ မတိမကျ ဗရမ်းဗတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၁ပြ = တစ်လမ်း = တာ ၅၀ = ပေ ၅၅၀ခန့်ပါ” crd
Previous Article ဒီေန႔က သာေကတမွာေနာ္ လမ္းေပၚမွာ လူကေတာ့အျပည့္ပဲ…….
Next Article ပြည်သူတွေ အသွားအလာ ဂရုစိုက်ကြပါ အရေးကြီးပါတယ်